Zimbabwe’s main hydro power dam running out of water after drought – Zimbabwe Daily
Zimbabwe’s main hydro power dam running out of water after drought
ZIMBABWE – Zimbabwe’s main hydro power dam could stop producing electricity in six months if water levels keep falling after the nation’s worst drought in more than two decades, an official said on Friday.
Zimbabwe and neighboring Zambia both rely heavily on the Kariba dam for electricity, and falling dam levels at the plant raises the threat of deeper power cuts in the two countries which are already faced with frequent power shortages.
Zimbabwe is importing 300 MW of electricity from South Africa’s power utility Eskom [ESCJ.UL] and another 40 MW from Mozambique, which has eased the power cuts, officials say.
The drought has left 3 million people in need of food aid in Zimbabwe, and farmers in Zimbabwe have lost cattle and crops to drought but fear the worst is yet to come.
ZIMBABWE - Zimbabwe's main hydro power dam could stop producing electricity in six months if water levels keep falling after the nation's worst drought in more than two decades, an official said on Friday. Zimbabwe and neighboring Zambia both rely hea...